Ọnọdụ nke njikọta ezinụlọ | Law & More B.V.
blog » Ọnọdụ na njikọ nke njikọta ezinụlọ
Ọnọdụ na njikọ nke njikọta ezinụlọ
Mgbe onye si mba ọzọ nwetara akwụkwọ ikike obibi, a na-enyekwa ya ikike ijikọ ezinụlọ. Mweghachi ezinụlọ pụtara na ndị otu ezi na ụlọ nwere ikike ịbịa Netherlands. Nkeji edemede 8 nke Nkwekọrịta Europe na Ihe Ndị Ruuru Mmadụ nyere ikike ịkwanyere ndụ ezinụlọ ùgwù. Njikọ ezin’ulo na-emetụtakarị nne na nna, ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị na ụmụ aka kwagara mba ọzọ. Agbanyeghị, onye ji ọkwa ya na ezinụlọ ya ga-emerịrị ọtụtụ ọnọdụ.
A na-akpọkwa onye ji ọkwa ahụ dịka onye nkwado na usoro maka ijikọ ezinụlọ. Onye nkwado ahụ ga-etinyerịrị akwụkwọ maka njikọta ezinụlọ na IND n’ime ọnwa atọ ka ọ nwachara ikike obibi. Ọ dị mkpa na ndị ezinụlọ ahụ hibere ezinụlọ tupu onye kwagara mba ọzọ gaa Netherlands. N'ihe banyere alụmdi na nwunye ma ọ bụ mmekorita, onye si mba ọzọ ga-egosiputa na mmekọrịta ahụ ga-adịgide adịgide ma bụrụ naanị ya na ọ dịlarị tupu ọpụpụ. Onye ji ọkwa ahụ aghaghị igosipụta na ezinụlọ ebidola tupu njem ya. Isi ihe akaebe bu akwukwo, dika akwukwo di na nwunye ma obu akwukwo omumu. Ọ bụrụ na onye nwere ọnọdụ enweghị ike ịnweta akwụkwọ ndị a, enwere ike ịrịọ nyocha DNA mgbe ụfọdụ iji gosipụta njikọ ezinụlọ. Na mgbakwunye na igosipụta mmekọrịta ezinụlọ, ọ dị mkpa na onye nkwado ahụ nwere ego zuru oke iji kwado onye òtù ezinụlọ. Nke a na-apụtakarị na onye ji ọkwa ga-enwerịrị ụgwọ opekatampe kacha mma ma ọ bụ pacenti ya.
Agbakwunyere usoro na ọnọdụ
Ọnọdụ ndị ọzọ metụtara ụfọdụ ndị ezinụlọ. Ndị ezinaụlọ dị n'etiti 18 na 65 gafere ule nyocha nke obodo tupu ha abịa Netherlands. A na-akpọkwa nke a dị ka ihe jikọrọ mmekọrịta obodo. Ọzọkwa, maka alụmdi na nwunye etinyere tupu onye ọkwa ọ gara Netherlands, onye ọlụlụ abụọ ga-enwerịrị afọ 18 dịkarịa ala. afọ.
Ọ bụrụ na onye nkwado ahụ chọrọ ijikọ ọnụ na ụmụ ya, achọrọ ihe ndị a. Childrenmụaka ga-abụrịrị ụmụaka rue oge enyere akwụkwọ maka itinyekọta ezinụlọ. Childrenmụaka site na 18 ruo 25 afọ nwekwara ike tozuo maka ijikọ ezinụlọ na nne na nna ha ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ bụ nke ezinụlọ ma ọ bụ nke ezinụlọ nke ndị nne na nna.
Tupu ndị IND nyere ndị ezinụlọ ha ikike ịbịa Netherlands, ndị otu ezinụlọ ga-agarịrị na ndị nnọchi anya ndị Dutch. N’ebe a, ha nwere ike itinye akwụkwọ maka MVV. MVV pụtara 'Machtiging voor Voorlopig Verblijf', nke pụtara ikikere maka ịnọ nwa oge. Mgbe ị nyefere akwụkwọ anamachọihe ahụ, onye ọrụ gị na ndị nnọchi anya mba ọzọ ga - ewere mkpịsị aka mmadụ. Ọ ga-etinyekwa foto paspọtụ ma bịanye aka na ya. A ga-etinyezi akwụkwọ anamachọihe ahụ na IND.
Gwọ njem njem gaa na ndị nnọchi anya mba nwere ike ịdị oke oke ma na mba ụfọdụ ọ nwere ike ịdị oke egwu. Onye nkwado ahụ nwekwara ike itinye akwụkwọ maka MVV ya na IND maka ndị ezinụlọ ya (s). Nke a na-atụ aro ya n'ezie site na IND. N'okwu ahụ, ọ dị mkpa na onye nkwado ahụ na-ewere foto paspọtụ nke onye ezinụlọ ya yana nkwupụta ochie nke onye otu ezinụlọ bịanyere aka na ya. Site n'okwu nkwupute nke onye otu onye otu na-ekwupụta na ọ nweghị onye omekome gara aga.
IND ga-elele ma ngwa gị ezuola. Nke a bụ ikpe mgbe ị juputara nkọwa ahụ n'ụzọ ziri ezi ma gbakwunye akwụkwọ niile dị mkpa. Ọ bụrụ na ngwa ahụ ezughi ezu, ị ga-enweta leta iji dozie nnabata ahụ. Akwụkwọ ozi a ga-enwe ntuziaka banyere otu esi mezue ngwa ahụ na ụbọchị nke ngwa ahụ ga-emerịrị.
Ozugbo IND natara akwụkwọ niile na nsonaazụ nke nyocha ọ bụla, ọ ga-enyocha ma ị ga-emezu ọnọdụ ndị ahụ. N'okwu niile, ndị IND ga-enyocha, dabere na nyocha nke onye ọ bụla maka ọdịmma, ma enwere ezinụlọ ma ọ bụ ndụ ezinụlọ nke Nkeji edemede 8 ECHR metụtara. Then ga-enweta mkpebi na ngwa gị. Nke a nwere ike ịbụ mkpebi na-adịghị mma ma ọ bụ mkpebi dị mma. N'ihe banyere mkpebi na-adịghị mma, IND jụrụ ngwa ahụ. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na mkpebi nke IND, ị nwere ike ịjụ mkpebi ahụ. Enwere ike ime nke a site na iziga akwụkwọ gbasara ịjụ IND, nke ị kọwara ya ihe kpatara na ị kwenyeghị na mkpebi ahụ. Kwesịrị ịnye mkpesa a n'ime izu 4 ka ụbọchị nke mkpebi IND gachara.
Ọ bụrụ na mkpebi dị mma, a kwadoro arịrịọ maka njikọta ezinụlọ. Onye ezinụlọ ahụ kwere ka ọ bịa Netherlands. Onye ahụ nwere ike iburu MVV na ụlọ ọrụ nnọchite anya obodo ahụ ekwuputara na mpempe akwụkwọ anamachọihe. A ga-eme nke a n'ime ọnwa 3 mgbe mkpebi dị mma ma na-enwe oge ịhọpụta. Onye ọrụ nke ụlọ ọrụ nnọchite anya mba na-ejide MVV na paspọtụ. MVV dị irè maka ụbọchị 90. Onye otu ezinaụlọ ahụ ga-agarịrị na Netherlands n'ime ụbọchị 90 ndị a wee kọọrọ ya ebe nnabata na Ter Apel.
You bụ mba ọzọ ma ị chọrọ enyemaka na ma ọ bụ ị nwere ajụjụ gbasara usoro a? Ndị ọka iwu anyị ga-enwe ọ toụ inyere gị aka. Biko kpọtụrụ Law & More.
Previous Post Ịgbahapụ
Next Post Mmebi na-ekwu: gịnị ka ịchọrọ ịma?